tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 2021-02-02
Rehefa raikitra ny fikarohana ny lesoka, ny detector lesoka, ny fahita matetika, ny probe sy ny sisa, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia mampiasa ny fenitra mifandraika amin'izany, ka hamafana ireo fepetra ireo, ary ezaho ampifandraisina amin'ny mason'ny mpampiasa. Famaritana ultrasonika amin'ny famonoana hazo lehibe, ny 2 ~ 3 ...
Fomba fanao sy fiasan'ny forging maimaimpoana
Ny fizotrany izay afaka manova ny endrika sy haben'ny billet raha oharina amin'ny sora-tanana mavitrika koa dia ny fizotran'ny deformation lehibe amin'ny fizotry ny forging maimaimpoana. Toy ny: Ny dingana fototra 1) Upsetti ...
Ny laharan'ny lozam-bolt Flange ary ny savaivony bolt dia voalaza. Ny isany sy ny savaivon'ny lavaka fikorianan'ny flange dia miovaova arakaraka ny kilasin'ny tsindry flange, fa ny karazana flanges rehetra amin'ny sokajy tsindry iray dia mitovy. Ny lozam-bolt flange dia nalamina tamin'ny savaivony bolt sy ...